Filazam-baovao faha-51 -
Accueil > Newsletter > Filazam-baovao faha-51
FITANTANANA NY TANY : MANAN- KOLAZAINA MIKASIKA NY VOLAVOLAN-DALANA NY OLOM-PIRENENA MALAGASY
Rehefa manao lalàna ny tompon’andraikitra ara-politika malagasy dia manitsakitsaka hatrany ny Lalam-panorenana noho izy ireo tsy manaja ny zon’ny olom-pirenena hahazo vaovao (1). Tena tsy azo ekena mihitsy ny tsy fahafahan’ny olom-pirenena mahita na ny volavolan-dalàna mandritry ny herinandro mialoha ny fandinihina azy ao amin’ny Antenimieram-pirenena, na ny lalàna ao aorian’ny fandanian’ny solombavambahoaka azy. Io fomba fiasa io dia manakana tanteraka ny mponina tsy handray anjara amin’ny adi-hevitra, hilaza ny heviny ary hahazo vaovao nefa ny olom-pirenena dia voalaza fa tokony hahafantatra sy hampihatra ny lalàna lany arak’ireo dingana ireo. Io tsy fisian’ny mangarahara io dia mikasika manokana ireo lalàna misy ifandraisana amin’ny tany sy ny fanajariana ny tany.
Ny fitakiana nangatahana sonia izay naparitaky ny Sehatra Iombonana ho an’ny Fananantany - SIF - sy ny Fikambanana miaro ny TANY tamin’ny 4 oktobra 2015 dia nanondro volavolan-dalàna samihafa neken’ny Filankevitry ny Ministra nefa mety ahatonga ho ara-dalàna fepetra izay mikendry ny hanokatra làlana malalaka ho an’ny fanalàna sy fandroahana ny olom-pirenena ary indrindra ny tantsaha eo amin’ny sombin-taniny.
Aiza ho aiza izao ny mikasika ny lalàna faha-2015-039 momba ny fiaraha-miombon’antokin’ny fanjakàna sy ny sehatra tsy miankina. Nolaniana nandritry ny fivoriana ara-potoanan’ny Antenimieram-pirenena io lalàna io ary vao avy nankatoavin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana tamin’ny 29 janoary 2016. Hatramin’izao dia tsy nisy nampiseho ny votoatiny farany amin’izany « lalàna » izany. (2)
Ny andalana faha-37-n’ny filaza teo aloha-n’io volavolan-dalàna io anefa nanome alàlana ny Fanjakana hiroso amin’ny « fombafomba fanalàna ny zo maha-tompony sy fanambaràna fa filam-bahoaka, raha toa ka misy asa tokony hatao amin’ny tany efa fananan’olon-tsotra ary mandà ny fanomezana zo amin’ireo tany ilaina ho amin’ny fanatanterahana ny fifanarahana mikasika ny fiaraha-miasan’ny fanjakàna sy ny sehatra tsy miankina ny tompon’ny tany».(3) Manoloana izany ankanafina be izany, azo atao ve ny manantena fa nisy fanitsiana mirona ho amin’ny tombontsoan’ny olom-pirenena sy ny tantsaha malagasy sa tokony hiomana amin’ny tranga faran’izay ratsy indrindra ?
Nisy lalàna faharoa misy ifandraisana amin’ny fananantany nolanian’ny Antenimieram-pirenena tamin’ny 16 desambra 2015 dia ny Lalàna tondrozotra mikasika ny Fanajariana ny Tany. Afaka nahita ny volavolan-dalàna faha-011/2015 momba ny tondrozotra mikasika ny Fanajariana ny Tany ny Fikambanana miaro ny TANY : ny Lalàna momba ny tondrozotra mikasika ny Fanajariana ny Tany dia « mametraka ny drafitra ara-joridika ankapobeny mikasika ny Fanajariana ny Tany eo amin’ny fitsinjovana ny fampandrosoana lovainjafy. […]. Ny Fanajariana ny Tany […] dia miditra indrindra indrindra amin’ny fitantanana ny tany, ny fikajiana an-drenivohitra, ny fanadiovana, ny trano sy ny fonenana, ny fanajariana ny any ambanivohitra, ny fitantanana ny fitrandrahana harena ankibon’ny tany sy ny indostria, ny fikajiana ny tontolo iainana; ary ny fotodrafitr’asa sy fampitaovana iombonana. Izy ihany koa no mikarakara momba ny “tany midadasika sy ny tany atao tahiry » (4). lo lalàna mavesa-danja io anefa dia tsy nisian’ny adi-hevitra teo anivon’ny mponina nandritry ny volana nialoha ny nandaniana azy.
Tamin’ny taona 2012 ny Fikambanana miaro ny TANY dia efa naneho sosokevitra momba ny tokony hampandraisana anjara ny olom-pirenena rehetra amin’ny famolavolana sy fanapahan-kevitra mikasika ny fanajariana ny tany anivon’ny kaomina tsirairay. (5)
Ny antsimpirian’ny lalàna faha-2015-051 lany sy nankatoavin’ny Fitsaràna Avo momba ny Lalam-panorenana (HCC) (6) dia tsy nampahafantarina ny daholobe. Vao aingana ny filohan’ny Antenimieran’ny Varotra sy Indostria-n’Antananarivo - Chambre de Commerce et d’Industrie d’Antananarivo, araky ny notaterin’ny mpanao gazety iray, no feno fientanana : « Ankoatry ny risoriso (ny fanolikolena), ny Lalàna mifehy ny Fananan-tany dia anisan’ny sakana notondroin’ny mpampiasa vola tamin’ny 2015. Amin’izao fotoana izao, araky ny efa fantatrareo dia nohavaozina ireo lalàna ireo tamin’ny volana desambra lasa teo, hany ka mety hanintona bebe kokoa ny mpampiasa vola izay afaka hametraka ny volany amim-pilaminan-tsaina » (7)
Ny Fikambanana miaro ny TANY anefa mifanohitra fijery amin’izany ka manahy fa sao ity lalàna novokarina tanatin’ny mangingina tanteraka ity dia hanimba ny tombontsoan’ny olom-pirenena sy ny tantsaha.
Ho amin’ny fitantanana demôkratika sy tsimialonjafy (tsy manilika na iza na iza) eto Madagasikara, indrindra amin’ny mahakasika ny fananan-tany
Ny tsy fisiana mangarahara momba ireo volavolan-dalàna sy ireo lalàna voafidy dia mifanohitra tanteraka amin’ny foto-kevitry ny tsy fanilikilihana ny vondrom-bahoaka hamafisin’ny Pôlitika Nasionalin’ny Fampandrosoana.
Mitady tsy hampisy fiadian-kevitra miaraka amin’ny vondrom-bahoaka ny amin’ireo safidy hitera-boka-mavesatra eo amin’ny hoavin’ny mponina maro an’isa sy ny an’i Madagasikara ve ireo manam-pahefàna malagasy ? Azo tsoahina araka izany ve fa misy lohahevitra na fironana mifanohitra amin’ny tombontsoam-bahoaka ?
Manindry ireo soso-kevitry ny fikambanan’ny firaisamonim-pirenena KMF-CNOE (Fanabeazana Olom-pirenena - Education des citoyens) izay hitovizany hevitra (8) ny Fikambanana Miaro ny TANY ary manainga ny rehetra, mpitondra sy olom-pirenena malagasy, hampandroso fikaonan-doha mafonja sy hanolo-kevitra ho amina fitantanana demôkratika sy tsimialonjafy (na tsy manilikilika) ary koa ho amina famaritana ny andraikitry ny mpandray anjara isanisany eo amin’ny fiainam-bahoaka eto Madagasikara :
Anatina Demôkrasia mendrika izany fanondroana izany, dia tokony hampitain’ny mpiandraikitry ny Governemanta any amin’ny Olom-pirenena rehetra herinandro maro na volana maro mialoha ny hanolorana azy eo amin’ny Antenimieram-pirenena ireo volavolan-dalàna, mba hampisy fifanakalozana sy adi-hevitra ary fikaonan-dohan’ny Olom-pirenena rehetra.
Ireo Depiote (Solombavambahoaka) dia tokony hikirakira ireny volavolan-dalàna ireny miaraka amin’ny Olom-pirenena ao amin’ny fari-pifidianany, handray ny hevitra isanisany. Ny Fahendrena malagasy dia mampianatra antsika fa ny hevitry ny maro mahataka-davitra.
Mendrika ahafantatra ny antsipirian’ny lalàna isanisany hiadian-kevitra sy fidiana ny fitambaran’ny Olom-pirenena mba ahafahany mamakafaka sy mifanakalo ary maneho ny heviny amin’ny Olom-boafidy sy amin’ny Governemanta – satria ny Olom-pirenena tsirairay dia tsy maintsy hampihatra izany eo amin’ny fiainany.
Ny tsy fanaparitahana ny volavolan-dalàna ho fantatry ny besinimaro, ny fanafenana ny lalàna voafidin’ny Antenimieram-pirenena mandra-paneken’ny Fitsarana Avo momba ny Lalam-panorenana azy, dingana farany mialoha ny fanasoniavana faran’ny Filohan’ny Repoblika dia fanao mifanalavitra amin’ny demôkrasia. Anisan’ny vaha-olana hita fa nety efa nampiasaina tamina tranga sasany ny fampirantiana faobe eo amin’ny Tranon-kala (Internet) ireny volavolan-dalàna sy lalàna tapaka ireny.
Manoloana ny fahasimban’ny toe-karem-pirenena izay mampiditra ny sarambabem-bahoaka amin’ny kizo tena lalina, dia tokony hampihatra mangarahara tsy azo kianina sy hanao ho vain-dohan-draharaha ny fikaonan-doha amin’ny fitambaran’ny Olom-pirenena mahakasika ny tanjona sy paika hitondrana ny fiainam-pirenena ireo mpanao lalàna sy ireo mpitondra fanjakàna. Izany ezaka izany dia vao mainka marim-pototra momba ny fananan-tany, izay sarobidy tokoa ho an’ny tantsaha malagasy, ho an’ny Firenena ary ho an’ny taranaka faramandimby.
Parisy, faha-5 febroary 2016
Fikambanana Miaro ny Tany Malagasy / Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY
Nisintonana hevitra :
(1) Article 11 de la Constitution malgache de 2010
(4) Projet de loi n°011/2015 du 20/05/2015 portant Orientation de l’Aménagement du Territoire
Newsletter n° 90 par Admin (55 %)
Filazam-baovao faha-90 par Admin (24 %)
Newsletter n° 53 par Admin (24 %)
Newsletter n° 18 par Admin (23 %)
L’Afrique à vendre ... : (...)